सरकारको काम सन्तोष जनक देखिएनः ईतिहास विद् थापा
बुटवल, २ फागनु ।
नेपालका प्रथम शहीद लखन थापामगरको १४२ औं स्मृति दिवस बिहिबार बुटवल चौराह लखनचोकमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि मनाईएको छ ।
प्रथम शहीद लखन थापामगर अक्षयकोष तथा स्मृति प्रतिष्ठान् रुपन्देहीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा लखनचोक चौराहस्थित शहीद लखन थापाको पूर्णकदको शालीकमा माल्यार्पण पश्चात बोल्दै प्रदेश ५ सभा सदस्य तुलाराम घर्तीमगरले शहीदको सपनालाई कुण्ठित गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि ईतिहास विद् एम एस थापाले संघीयता र समावेशीता जस्ता मुद्दाहरु शहीदहरुले कोरेको दुरगामी सपना भएको बताएका छन् । सरकारले अहिलेका उपलब्धीहरुलाई कुल्चने दुषप्रयास गरेको बताएका थिए ।
देशको संरचना संघीय ढाँचा र विविधतायुक्त रहेको भएपनि यसको बेवास्ता गर्दै एकात्मक राज्यसत्ता प्रणाली लागु गर्न खोज्नु शहीदहरुप्रतिको अपमान भएको बताउनु भयो ।
नेपालमा भएका २००७ साल देखिका पछिल्ला क्रान्ती र महत्वपूर्ण परिवर्तनका घटनाहरुको जगको श्रेय प्रथम शहीद लखनथापामगर रहेको उहाँको भनाई थियो ।
प्रथम शहीद लखन थापामगर अक्षयकोष तथा स्मृति प्रतिष्ठान् रुपन्देहीका अध्यक्ष माथवरसिङ सलामीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री एम.एस. थापालाई सम्मान गरिएको थियो । सम्मानित पश्चात बोल्दै मन्त्री थापाले शहीद लखनथापाको शहादतलाई अवमूल्यन भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
जहाँनीया राणा शासनको विरुद्ध थापाले विद्रोहको सुरुवात नगरेको भए आजको यो स्थितिको परिकल्पना गर्न नसकिने उहाँको जिकिर थियो ।
कार्यक्रममा नेताहरु झम बहादुर गुरुङ, मगर संघका उपाध्यक्ष दल बहादुर वीरकट्टा, कमला बहिक, सनु थापा लगायतले बोल्नु भएको थियो । जनताको स्वतन्त्रताका लागि, निरङ्कशताको विरुद्ध जनतालाई संगठित र जागरित गरेको आरोपमा नेपालका प्रथम शहीद लखन थापामगरलाई तत्कालिन जहाँनियाँ राणा शासनका प्रधानमन्त्री जंग बहादुर राणाको निर्देशनमा वि.स. १९३३ सालमा ४२ वर्षको उमेरमा गोर्खा बुङ्कोट स्थित आफ्नै निवास अगाडि खिर्राको रुखमा झुण्ड्याएर फाँसी दिइएको थियो ।